လူတစ်ယောက်မှာ ဘာကြောင့်အိပ်ရေးဝဝအိပ်ဖို့က အရေးကြီးတာလဲ? | MyStyle Myanmar
လူတစ်ယောက်မှာ ဘာကြောင့်အိပ်ရေးဝဝအိပ်ဖို့က အရေးကြီးတာလဲ?
လူတစ်ယောက်ရဲ့အိပ်ချိန်ဟာ ၈ နာရီရှိသင့်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့တစ်နေ့တာက အိပ်ရေးဝခြင်း၊ မဝခြင်းနဲ့လည်း အများကြီးသက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်မှာ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ဖို့က ဘာလို့အရေးကြီးနေတာလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အိပ်ရေးမဝရင် တစ်နေကုန်ခေါင်းမကြည်တဲ့အတွက် ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်အလိုမကျကာ စိတ်ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ကျောင်းတက်နေရတဲ့သူတွေဆိုရင် စာလည်းခေါင်းထဲမဝင်တော့ပဲ စာသင်တဲ့အချိန်မှာ အိပ်ငိုက်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စာကျက်တဲ့အခါမှာလည်း ခေါင်းမကြည်ရင် စာလုံးဝမရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ညလုံးပေါက်မအိပ်ပဲ စာလုပ်တဲ့သူတချို့က စာမေးပွဲခန်းထဲရောက်ရင် စာတွေမေ့ကုန်ကြတာပါ။ အိပ်ရေးဝဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေဆိုလည်း အိပ်ရေးမဝရင် ခေါင်းကမကြည်တော့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ စိတ်မပါတော့ပါဘူး။ ဘာလုပ်လုပ်လည်းအဆင်မပြေ အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာအိုင်ဒီယာမှလည်းထွက်မလာတော့ပဲ စိတ်ညစ်နွမ်းပြီး စဉ်းစားမရဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်မှာ အိပ်ရေးဝဖို့က အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။
Photo Source: www.workingmother.com
ဘာမှမလုပ်ပဲအိမ်မှာပဲနေရတဲ့သူတွေကတော့ ညဘက်နောက်ကျမှအိပ်ပြီး မနက်ဆိုလည်း တော်ရုံနဲ့မထတော့ဘူး။ ဒီလိုနောက်ကျမှထလို့ အိပ်ရေးဝတာမှန်ပေမယ့်လည်း ညဘက်စောစောအိပ်ပြီး အိပ်ရေးဝတာလောက်တော့ လန်းဆန်းမှုမရှိစေပါဘူး။ နုံးတာမျိုးတွေ၊ မအီမသာဖြစ်တာမျိုးတွေ၊ ခေါင်းမကြည်တာတွေကတော့ အနည်းနဲ့အများဖြစ်တာပါပဲ။ အိပ်ရေးမဝရင် ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောကိုလည်း ထိခိုက်စေသလို၊ မှတ်ဉာဏ်ပိုင်းကိုလည်း ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ အိပ်ရေးမဝရင် မျက်ကွင်းညိုလာတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့အလှအပရေးရာကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဝက်ခြံတွေလည်း သိသိသာသာကိုထွက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကိုအိပ်ချိန် ၈ နာရီရှိသင့်ပါတယ်။ ညဘက်ကို နောက်ကျမှအိပ်တာမျိုးတွေမလုပ်ပဲ ပုံမှန်လေးစောစောအိပ်ပေးတာက အကောင်းဆုံးပါ။
Photo Source: www.navanskincare.com
MyStyle Myanmar2020-02-13T21:59:26+06:30February 12th, 2020|Lifestyle, အထွေထွေ ဗဟုသုတ – General Knowledge|